Abakhangisi B2B Bathola Impumelelo Ngokumaketha Okuqukethwe | Martech Zone
Njalo ngonyaka, inani lemali elitshaliwe ukumaketha kokuqukethwe amasu abonakala ekhuphuka. Ngokuqondile, abathengisi bokuqukethwe be-B2B bafuna ukuthola ukuqwashisa ngomkhiqizo, ukukhiqiza okuholayo, ukutholwa kwamakhasimende nokwethembeka, ithrafikhi yewebhusayithi, nokuthengisa ngokudala okuqukethwe kwabo. Njengoba abathengisi bethola ulwazi oluthe xaxa ngamasu abawasebenzisayo ukusabalalisa okuqukethwe kwabo, imaphi amaqhinga, amapulatifomu, kanye namathrendi athola izinzuzo ezinkulu kakhulu? LinkedIn hlangana I-MarketingProfs futhi I-Content Marketing Institute ukuphendula lo mbuzo, bese udiliza indawo yamanje.
Idatha ikhombisa ukuthi ama-73% wabakhangisi bakha okuqukethwe okuningi abakwenzile ngonyaka owedlule kanti abathengisi abaphumelele kakhulu bakhuthaza okuqukethwe kwabo kuma-7 media media platforms, kuqhathaniswa ne-4 kuphela esetshenziswa amaqembu angasebenzi kahle. I-infographics ikhombisa elinye lamasu aphumelele kakhulu, ikhula ngokuthandwa ngabathengisi be-B51B abangama-2% kulo nyaka, inyuke ngo-13% kusukela ngonyaka owedlule. I-91% yabathengisi be-B2B bakhetha ukukhuthaza okuqukethwe kwabo ku-LinkedIn, kulandelwe yi-Twitter ku-85%. Thola ukuthi yimaphi amaqhinga wokukhangisa okuqukethwe asetshenziswa kakhulu ngabakhangisi be-B2B futhi abakholelwa ukuthi aphumelela kakhulu ku- infographic Ngezansi.
Tags: ukumaketha kokuqukethwe kwe-b2bidatha ye-b2bi-b2b infographicUkukhangisa Okuqukethweinfographicmarketing
Nov 14, 2013 ngo-9: 48 AM
Kelsey, idatha enhle lapha !! Okuthunyelwe okufundisayo kakhulu ukusiza abanye abathengisi ukuthi babone ukuthi yini ephezulu yabathengisi beklasi abakwenzayo ngempumelelo !!
Nov 14, 2013 ngo-8: 36 PM
Ngiyabonga kakhulu! Ngijabule ukujabulele okuthunyelwe nomfanekiso.